एक युवा जसले काँग्रेसको गुट अस्वीकार गरे « Lalitpur Khabar
एक युवा जसले काँग्रेसको गुट अस्वीकार गरे
‘मैले तरुण दलको झण्डा समात्दा झण्डामा कुनै गुट थिएन । भुकम्पमा उद्दारमा हिड्दा त्याहाँ गुट थिएन । माओवादीसँग लड्दा मैले मेरो गुट देखिन आन्दोलानको क्रममा पुलिसको लाठीले मेरो गुट हेरेन । टाउको फुटेर बगेको रगतले मलाई गुट सोधेन । मेरो भाँचिएको खुट्टाले मेरो गुट सोधेन । राजदरवारकै अगाडि गणतन्त्रको नारा लगाउदै गर्दा मेरो छातीमा तेर्सिंएको आर्मीको राइफलले मेरो गुट हेरेन । संगठन गर्दा भोक भोकै हिडेको पेटले मेरो गुट सोधेन । कोरोनाको कहरमा गरिव जनता भोकै नपरुन भनेर फूड बैंक चलाउदा गुट थिएन तर आज पार्टीमा जिम्मेवारी खोज्दै गर्दा मेरो गुट खोजिदै छ……
मलाई सोधिदै छ तिमी मेरो गुटको हो की होइनौं ?
मचिच्चाउदै सगौरव भन्छु मेरो गुट काँग्रेस । मेरो गुट रुख ।
म चारतारा गुटको । म जय नेपाल गुटको
जय देपाल ! जय नेपाल ! ! जय नेपाल ! ! ! ’
यी पंङ्ती हुन् ललितपुर बज्रवाराहीस्थित नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन निर्वाचनको क्रममा एक उम्मेदवार अनिल श्रेष्ठले राखेको व्यानरको प्रचार सामाग्री । निर्वाचनस्थलमा धेरै व्यानर टाँगिएका थिए । तर अनिलको यो प्रचारशैली बज्रबाराहीमा चर्चाको विषय बन्यो ।
अनिल लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसमा समाजसेवासँगै राजनीतिमा जोडिएको बताउँछन् । उनका अनुसार उनले धेरै सामाजिक काम गरे । तर कोरोनाको महामारीमा चापागाँउ बजारमा फुड बैंक चलाउदा उनको कामको राम्रो चर्चा भएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनमा आफू जिम्मेवारीमा आउन खोज्दा अनिलको चित्त दुखेको बताउछन् । एक गुटले उनलाई निर्वाचनमा किटक दिएन । भन्छन्, ‘मलाई अर्को गुटले आर्कशक पद सहित चुनाव लड्न अनुरोध गरेको थियो । तर मैले मानिन । स्वतन्त्र लड्न तयार भए ।’
तर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका अनिलले निर्वाचनपमा १ सय ४९ मात्रै मत पाए । गुट अस्विकार गर्दा उनी निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।
गुट अस्विकार गर्दा आफू पराजित भए पनि आफू जित्ने समकक्षीहरुबीचमा बसेर बधाई दिएका र खुशी साटेको अनिल बताउछन् । गुटले राजनीतिलाई धुमिल बनाएको बुझाई राख्ने गुटगत राजनीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको बताउछन् ।
गुटगत राजनीतिका कारण पराजित अनिल आफूले जितेको बताउछन् । भन्छन्, ‘गुट अस्वीकार गर्ने आँट गरे ।मैले हारेर पनि मेरो जित भएको छ ।’